တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: အားရနေလို့ ... အားကျစေဖို့ ... (အပိုင်း ၂)
သြော် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မနေ့ကပဲ အဲ့ဒီအင်တာဗျူးကို သတိယနေသေးတယ်။
စိတ်ထဲမှာ မတင်တော့ဘူးတောင် အောက်မေ့လိုက်တာ။။
အပိုင်း ၃ ကိုမျှော်နေမယ်နော်...
အင်တာဗျူးဖို့ သတိယတဲ့ မမေကိုလဲ ကျေးဇူးပါနော်..
သာဓုခေါ်သွားပါတယ်။ ဖတ်ရတာ၊ သိရတာ ၀မ်းသာစရာပါပဲ။ ဆက်လက်ပြီး အောင်မြင်မှု၊ အေးချမ်းမှုတို့နှင့် ခရီးဆက်နိုင်ပါစေ...
9/21/2011 1:56 AM
suchagreat article...thanksalot...so much inspiring
9/21/2011 3:22 AM
တကယ်ပြောတာ ကျွန်မလဲ သီလရှင်ဝတ်ဖြစ်ရင် စာပေဘက်ကို ပိုပြီးအားစိုက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်ပေမဲ့ ထူးချွန်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို အားကျချီးကျူးမိပါတယ်။
9/21/2011 5:22 AM
ဖတ်ပြီးသွားပြီး ကျေးဇူးပါ တကယ် လေးစားဖို့ ကောင်းပါတယ်
သြ ဒါနဲ့ မြဝတီ က အင်တာဗျူး လုပ်မဲ့သူ လိုလို့ တဲ့ .. ဟို ရုပ်ရှင်မင်းသမီး နဲ့ သွားဗျူးပေးပါအုန်းတဲ့ ..သံချပ်ကာ အင်ကျီ ဝတ်ပြီးလေ
ဗဟုသုတွေ ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ မမမေ ...
9/21/2011 8:24 AM
ကြီးမေရေ ဒုတိယပိုင်းမျှော်နေမိတယ်။ မေးမလို့ပဲ မတင်သေးဘူးဆိုပြီးတော့လေ။ အင့်...အလုပ်မအားသေးလို့ပဲ မတင်သေးတာနေမှာပါဆိုပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ ပြန်ဖြေမိပါတယ်။
သေချာကို ဖတ်သွားပါတယ် ကြီးမေရေ။ အော်...ဒါနဲ့ အစိမ်းရောင်က သီလရှင်တောင် ၀တ်ချင်လာပြီနဲ့ တူတယ်။ နော်။
တတိယပိုင်းကိုလည်း ဆက်ဆက်မျှော်နေပါ့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ ကြီးမေရေ။
မြန်မြန်လို့ မတောင်းဆိုတော့ပါ အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာ တင်မယ့် အပိုင်း သုံးကို မျှော်နေပါတယ်
ကြီးမေ ကျန်းမာ အဆင်ပြေပါစေ ...
လေးစားအားကျမိတယ် မေဓာဝီရေ။ အခုလိုဖတ်ခွင့်ရအောင် မျှဝေပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါ။ ပို့စ်တင်တာအမှားမပါအောင် ပြင်ဆင်တာကို သဘောကျတယ်။
အပိုင်း-၂ မဖတ်ခင်မှာ အပိုင်း-၁ ကို နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ဖတ်လိုက်သေးတယ်၊ အင်တာဗျူးရဲ့ စီးကြောင်းထဲ ပြန်ဝင်မိအောင်လို့..၊း) ဒီအပိုင်းကို ဘာမှ မဖြတ်ဘဲ တင်ပေးတာ မှန်ပါတယ် မမေရေ...၊ နည်းနည်းလေး ရှည်သလို ရှိပေမယ့် တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်၊ မေးတဲ့သူရဲ့ ပြင်ဆင်မေးခွန်းတွေ၊ ဆင့်ပွားမေးခွန်းတွေ ကောင်းသလို ပြန်ဖြေတဲ့ မပြည့်ပြည့်ရဲ့ အဖြေတွေကလည်း ထိထိမိမိနဲ့ ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ရှိလှတယ်၊ အပိုင်း-၃ ကိုလည်း စောင့်နေ ပါ့မယ်..။
သူလို အမျိုးသမီး အများအပြား ပေါ်ပေါက်နိုင်ပါစေ။
အားကျမိပါတယ်..အပိုင်း ၃ ကိုလည်း စောင့်မျှော်နေပါတယ်..
အားလည်းမရဘူး .. အားလည်းမကျဘူး ...
ကဲ ... ဘာဖြစ်သေးတုန်း ... :P
Both interviewer and interviewee are good.
Especially, discussion about religious mission, culture and language are very precious for overseas Burmese community. I will keep reading.
11/03/2011 5:24 AM